Tags: ပဋ္ဌာနပါဠိ (ပဋ္ဌမတွဲ) ပဋ္ဌာန်း pahtan pathan patan pa htan pa than pa tan Z - Mettashin ShwePyiThar - U Zawana - အရှင်ဇဝန - မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ကြောက်ရင်...
Tags: မေတ္တာရှင်အရှင်ဇ၀န(ရွေပြည်သာ) - ashinzawana ashin_zawana shwepyithar myittarshin mettashin uzawana u_zawana Z - Mettashin ShwePyiThar - U Zawana - အရှင်ဇဝန - မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ပြုံးသေမဲ...
ပြုံးသေမဲ့သေတရားတော် အရှင်ဇ၀န ရွှေပြည်သာ
Tags: မေတ္တာရှင်အရှင်ဇ၀န(ရွေပြည်သာ) - ashinzawana ashin_zawana shwepyithar myittarshin mettashin uzawana u_zawana M - Munle (Monlae) Tawya - မုံလယ်တောရဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသံဝရ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] အိုးကွဲပန...
Tags: မုံလယ်ဆရာတော် , မုံလယ်တောရဆရာတော် , မုံလယ် , monelaltawya sayartaw monelaltawya sayardaw monlae munle tawya monlal sayardaw monlalsayardaw M - Munle (Monlae) Tawya - မုံလယ်တောရဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသံဝရ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] သီလပေးနှင...
Tags: မုံလယ်ဆရာတော် - monelaltawya sayartaw monelaltawya sayardaw monlae munle tawya M - Munle (Monlae) Tawya - မုံလယ်တောရဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသံဝရ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] မြို့စွဲ၊...
မုံလယ်တောရဆရာတော်ကြီး Tags: မုံလယ် ဆရာတော် - monelaltawya sayartaw monelaltawya sayardaw monlae munle tawya S - SuPaung YaHanKhan ShinPyu - စုပေါင်း ရဟန်းခံ၊ရှင်ပြု / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ကော်လိုရာ...
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု။ ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်။ ဓမ္မပါလကျောင်းတော်။ 2010 ခုနှစ် ရဟန်းခံရှင်ပြုနှင့်...
Tags: ကော်လိုရာဒို Denver Colorado Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ The Great Chronicle of...
Tags: The Great Chronicle of Buddhas (Volume 6, Part 2) D - Dhamma - ဓမ္မ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ပဲခူးမြို...
Posted By: mr.zawminnaung
Tags: ဆရာတော်ဦးကောဝိဒ - sayardaw sayartaw ukawida u_kawwida Pages: 1234567 of 68